Golaha Wasiirada oo mowqif cad ka istaagay duqeyntii Mareykanka ee Gaalkacyo (Akhriso) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Golaha Wasiirada oo mowqif cad ka istaagay duqeyntii Mareykanka ee Gaalkacyo (Akhriso)
September 29, 2016 admin6692 Comments on Golaha Wasiirada oo mowqif cad ka istaagay duqeyntii Mareykanka ee Gaalkacyo (Akhriso)
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa goor dhow war ka soo saaray duqeyntii Mareykanka uu ku beegsaday Ciidamada Maamulka Galmudug, iyadoo walaac looga muujiyay sheegashada Puntland ee ku aadan duqeynta ka dhacday duleedka Gaalkacyo.
War qoraal ah oo ka soo baxay Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Maxamed Cumar Carteh ayaa lagu sheegay go’aan gole oo ku saabsan asnixinta war-muritiyeedka duqeyntii marekabka u geystay Ciidamada iyo shacabka Galmudug, sida lagu yiri qoraalka.
Go’aanka ansixinta war murtiyeedka ansixinta Golaha Wasiirada ee ku saabsan duqeynta Mareykanka ayaa cod buuxa Golaha Wasiirada ku ansxiyeen, iyaddoo Guddi wasiiro ah loo saaray arrintan si ay baaritaano ugu sameeyaan.
Waxaa kaloo Golaha Wasiirada ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay duqeyntaas shacabkii iyo ciidamada Galmudug, sida lagu yiri qoraalka.
Qoraalka ka soo baxay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ahna Kusimaha Ra’iisul Wasaaraha ayaa loogu baaqay Maamulada Galmudug iyo Puntland inay xiisada dejiyaan.
Dhageyso:Madaxweynaha galmudug ayaa kahadlay Duqeyntii diyaradaha mareykanka ugeysten ciidamo katirsan Galmudug
Akhriso: Magacyada iyo Deegaanada ay kasoo jeedaan Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Hindiya
War-Murtiyeed: Shirweynaha Wadatashiga Beesha Sacad